Gamuchira Mharidzo Zvidzidzo kubva kuemail Nyanzvi | Martech Zone
Meseji yekutambira inogona kutanga yaita sediki sezvo vashambadziri vazhinji vangangofungidzira kana mutengi achinyoresa, gwaro raitwa uye vakasimbiswa mune ravo basa. Sevashambadzi, zvisinei, ibasa redu kutungamira vashandisi kuburikidza ne ose ruzivo nekambani, nechinangwa chekusimudzira chinogara chichiwedzera mutengi hupenyu hwakawanda.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvechiitiko chemushandisi ndiyo yekutanga pfungwa. Aya ekutanga mafungiro anogona kuseta zvinotarisirwa uye kana akaremerwa, vatengi vanogona kusarudza kupedza rwendo rwavo ipapo ipapo.
Makambani mazhinji anotadza kubvuma kuti kukosha pabhodhi kunogona kuve kwakakosha sei. Kukundikana kudzidzisa vashandisi venzvimbo zhinji iyo kambani inogona kupa kukosha kunogona kupangidza njodzi kune ramangwana rekambani. Meseji yekutambira inogona kuve kapu yesirivheri yekupa vatengi ruzivo rwakakosha urwu.
Saka, zvii zvinhu zvemushandirapamwe wemashoko ekugamuchira anobudirira? Kubva pakufunda makambani ari kubudirira kubhodhi vashandisi pachiyero pamwe nemasaini avo ekugamuchira meseji, pane mamwe madingindira akajairika:
Tumira kubva kukero yeemail yemunhu.
Gadzirisa iwo wenyaya mutsara nezita remugashiri.
Rondedzera izvo vatengi vanogona kutarisira zvinotevera.
Govera yemahara zvemukati uye zviwanikwa pamwe nezvidimbu.
Kurudzira kuendesa kushambadzira.
Kuteedzera nzira idzi mukati meemail yako mameseji anotambira kunogona kubatsira kuwedzera kudzvanya-kuburikidza nemitengo uye kuita. Kuita kwako mumaemail chete kwawanikwa kuwedzera mitengo yakavhurika ne 26%.
Chimwe chiitiko chinonakidza muemail ndechekupa maficha ekufamba mukati mezviratidzo kuti akurumidze kukwezva ziso uye kurichengeta rakabatana. MaGIF, semuenzaniso, anopa mashoma chete mafuremu ayo anochengeta saizi diki uye anotendera maemail eHTML kuti achengetedze inokurumidza kutakura kumhanya.
Kuendesa kwekushambadzira kwave kumwe kubatanidzwa kukuru mukati memeseji inogamuchirwa yekusimudzira bhizinesi kuburikidza neshoko remuromo. Kana mutengi achigovana kusaina-kwazvino kana kutenga neshamwari inogona kuva nzira ine simba yekutendeuka, ndosaka email yekutanga inguva huru yekudyara mbeu iyi. Imwe yedzakanakisa nzira dzekusimudzira yakabudirira yekuendesa kushambadzira ndeyekupa maviri-mativi kupihwa. Izvi zvinopa vese mutengi ari kugovana uye mugashiri wavo nechikurudziro chekuita pane zvatumirwa.
Uchishandisa nzira dzakadai uye zvimwe kune yako email inogamuchira meseji mishandirapamwe inogona kubatsira kusimudzira mushandisi ane hutano pane boarding uye yakanaka yevatengi ruzivo. Shandisa zvinoonekwa pazasi kubva kuCleverTap kutungamira yako yekugamuchira meseji zano.
Tags: tsambambozha personalizationmatipi emashokoonboarding email mesejionboarding mesejikutumira kushambadzirakugamuchira shoko
KC Karnes inyanzvi inozivikanwa yekutengesa masisitimu uye muzvinabhizimusi ane basa rekukudza mamwe emakambani anopisa tekinoroji muSilicon Valley, kusanganisira CleverTap, Akangwara Mobile Kushambadzira Platform.